Mapurisa Anoti Ari Kuferefeta Kambani yeFidelity Printers
Mapurisa anoti ave kuferefeta kambani yeFidelity Printers and Refineries zvichitevera kusungwa kwakaitwa mutungamiri weZimbabwe Miners’ Federation akambomiswa basa, Muzvare Henrietta Rushwaya, panhandare yendege muHarare svondo rapera vaine goridhe rakagezwa rairema makirogiramu matanhatu.
Mupurisa ari kufeya nyaya iyi, Detective Chief Inspector Michael Chibaya, vaudza dare pakunzwikwa kwechikumbiro chaMuzvare Rushwaya nevamwe vavo vana chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti goridhe rakagezwa rinowanikwa kukambani yeFidelity Printers and Refineries chete saka semapurisa vari kuda kuziva kuti goridhe iri rakazopedzisira rave mumaoko aMuzvare Rushwaya sei ivo vasina rezeresi rekuti vaburitse goridhe kunze kwenyika.
Gweta raMuzvare Rushwaya, VaTapson Dzvetero, vachibvunzurudza VaChibaya, vati bhegi rakawanikwa riina Muzvare Rushwaya riine goridhe harisi iro ravaifanira kutakura vachiti vakaisirwa bhegi risiri iro mumotokari yakavatakura kubva kumba kwavo kuenda kunhandare yendege vachiti mabhegi aya akafanana.
VaDzvetero vati Muzvare Rushwaya vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika sezvo VaChibaya vabvuma kuti bazi reLaw and Order ravanoshandira richibata nyaya dzezvematongerwo enyika.
VaDzvetero vati zvinoshamisa kuti nyaya iyi haizi kuferefetwa nemapurisa anoona nezvehuori pamwe nezvicherwa.
Asi VaChibaya vati vanoudzwa zvekuita kubva kumuzinda wemapurisa.
VaDzvetero vatiwo zita remudzimai wemutungamiri wenyika, Amai Auxillia Mnangagwa, rave kupinzwa munyaya yaMuzvare Rushwaya kuti nyaya yavari kupomerwa iwonekwe seine zvematongerwo enyika mukati.
Asi VaChibaya vati zvose zvakanyorwa mumapepa ehurumende vanenge vawana humbohwo kubva kuvanhu vavanenge vavapa humbowo vachiti pane mapurisa akasungwa mushure mekunge achinja mapepa aifanira kuendeswa kudare panyaya iyi zvavati zvaizoita kuti vasungwa ava vaonekwe sevanhu vasina mhosva kwete kuti vari kupinza zvematongerwo enyika.
VaChibaya havana kunyatsotsanangura kuti sei zita raAmai Mnangagwa riri kupinzwa munyaya asi vati mashoko ekutanga akataurwa naMuzvare Rushwaya vachisungwa ndeekuti goridhe raive raVaAli Mohamad.
VaChibaya vati havangabvume kuti goridhe iri raiva raMuzvare Rushwaya kunyange hazvo vakanga vasina kuona mapepa ekupomera Muzvare Rushwaya mhosva akaunzwa kudare pavakazotora nyaya iyi kuti vaiferefete kubva kune mumwe mupurisa akange achiferefeta nyaya iyi VaBruno Chiketo.
Nyaya iyi yakatarisirwa kuenderera mberi mangwana apo VaChibaya vakatarisirwa kuenderera mberi vachibvunzurudzwa nemagweta kuti sei vari kupikisa kuti vasungwa ava vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso.